ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > ယုံကြည်ခြင်းအရာသည် WCG သတ်မှတ် > သစ္စာရှိမှု၏အမွေ
Das Erbe der Gläubigen ist Erlösung und ewiges Leben in Christus als Gottes Kinder in Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Schon jetzt versetzt der Vater Gläubige ins Reich seines Sohnes; ihr Erbe wird im Himmel bereitgehalten und wird in ganzer Fülle beim zweiten Kommen Christi übergeben werden. Die auferstandenen Heiligen regieren mit Christus im Reich Gottes. (1. ဂျိုဟန် 3,1နှစ်ဆယ် 2,25; Römer 8, 16-21; Kolosser 1,13; ဒံယေလ 7,27; 1. ဓာတ်ဆီ 1,3စာ-၂၈; epiphany 5,10)
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တွင်ဆုလာဘ်များအကြောင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြောခဲ့ဖူးသည်။ အသင်းသားများစွာကဒီထင်မြင်ချက်ကိုအလွန်အားတက်စရာနဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့နားလည်နိုင်သောထာဝရအသက်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ကျိုးစွန့်မှုများကိုအကျိုးရှိစေသည့်ရုပ်ပိုင်းဆုလာဘ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်။
သတင်းကောင်းကကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ကျိုးစွန့်မှုများသည်အချည်းနှီးမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုများသည်အယူဝါဒဆိုင်ရာနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုများပင်ရရှိခဲ့ပါလိမ့်မည်။ သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်လုပ်ရပ်၊ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည်ဘုရားသခင့်နာမတော်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆုချလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။
Beginnen wir, indem wir die Art und Weise betrachten, wie Jesus die Frage von Petrus beantwortete: «Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben» (Matthäus 19,28-29) ။
Das Markusevangelium macht es deutlich, dass Jesus über zwei unterschiedliche zeitliche Perioden spricht. «Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange: jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen – und in der zukünftigen Welt das ewige Leben» (Markus 10,29-30) ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ နောက်လိုက်ဖို့လယ်မြေကိုစွန့်လွှတ်သူတိုင်းကို100က ၁၀၀ ပေးမယ်လို့ကတိမပေးပါဘူး။ သူကလူတိုင်းကိုချမ်းသာကြွယ်ဝအောင်လုပ်မယ်လို့ကတိမပေးပါဘူး။ သူကမိခင် ၁၀၀ ပေးမယ်လို့ကတိမပေးပါဘူး။ သူကဒီမှာတိကျတဲ့ပကတိလမ်းအတွက်စကားပြောမဟုတ်ပါဘူး။ သူဆိုလိုခြင်းမှာဤဘဝ၌ကျွန်ုပ်တို့ထံမှရရှိသောအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့အရှုံးပေးလိုက်သည့်အရာများထက်အဆတစ်ရာလောက်တန်သင့်သည်။ စစ်မှန်သောတန်ဖိုး၊ တိုင်းတာသောတန်ဖိုးအားဖြင့်ယာယီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိုက်မဲမှုကြောင့်မဟုတ်ပါ။
Sogar unsere Prüfungen haben einen geistlichen Wert zu unserem Nutzen (Römer 5,3-4; ဂျိမ်း 1,2-4), und dies ist mehr wert als Gold (1. ဓာတ်ဆီ 1,7). Gott gibt uns manchmal Gold und andere vorübergehende Belohnungen (vielleicht als ein Hinweis der besseren Dinge, die kommen werden), aber die Belohnungen die am meisten zählen, sind jene, die am längsten währen.
Offen gesagt, ich bezweifle, dass die Jünger verstanden, was Jesus sagte. Sie dachten immer noch im Sinne eines physischen Königreiches, das den Israeliten bald irdische Freiheit und Macht bringen würde (Apostelgeschichte 1,6). Das Martyrium von Stephanus und Jakobus (Apostelgeschichte 7,5၂၇၀၆၀-၅၈၂၂၀; ၁၀၁၂၁၁၀၆၀၀2,2) mag als ziemliche
Im Gleichnis von den Schafen und den Böcken wird den gesegneten Jüngern erlaubt, ein Königreich zu ererben (V. 34). Im Gleichnis von den Verwaltern wird der treue Verwalter belohnt, indem er über alle Güter des Meisters gesetzt wird (Lukas 12,42-44) ။
In den Gleichnissen von den Pfunden, wurde den treuen Knechten Herrschaft über Städte gegeben (Lukas 19,16-19). Jesus verhiess den 12 Jüngern Herrschaft über die Stämme Israels (Matthäus 19,28; လုကာ ၂2,30). Mitgliedern der Gemeinde von Thyatira wird Macht über die Nationen gegeben (Offenbarung 2,26-27) ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၀ ိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိလျှင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာများမလိုအပ်တော့ပါ။ ဆိုလိုတာက၊ ထာဝရတည်မြဲတဲ့ဆုကျေးဇူးတွေအကြောင်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကွယ်ပျောက်သွားမဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတွေကိုမဟုတ်ဘဲဝိညာဉ်ရေးဆုလာဘ်တွေအကြောင်းပြောသင့်တယ်။ သို့သော်ပြtheနာမှာကျွန်ုပ်တို့မသိသောဖြစ်တည်မှု၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြရန်ဝေါဟာရမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာကိုဖော်ပြရန်ကြိုးစားသည့်အခါ၌ပင်ရုပ်ဝတ္ထုကိုအခြေခံသောစကားလုံးများကိုအသုံးပြုရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထာဝရဆုကျေးဇူးသည်ဘဏ္treာနှင့်တူလိမ့်မည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၎င်းသည်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေဆက်ခံခြင်းနှင့်တူသည်။ တစ်နည်းဆိုရလျှင်သခင်ဘုရား၏ဘဏ္goodsာရေးကိုတာဝန်ယူခြင်းနှင့်တူလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သခင်အတွက်စပျစ်ဥယျာဉ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်တူသည်။ ဒါဟာမြို့ကြီးတွေအပေါ်မှာတာဝန်ရှိတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကဲ့သို့ပင်သခင်ဘုရား၏ ၀ မ်းမြောက်ခြင်း၌ငါတို့စားကြလိမ့်မည်။ ဆုလာဘ်သည်ဤအရာများနှင့်ဆင်တူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ိညာဉ်ရေးကောင်းချီးများသည်ဤဘ ၀ ၌ကျွန်ုပ်တို့သိသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာများထက်များစွာသာလွန်သည်။ ဘုရားသခင့်မျက်မှောက်တော်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ထာ ၀ ရရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များထက် ပို၍ ဘုန်းကျက်သရေနှင့်ရွှင်လန်းမှုရှိလိမ့်မည်။ မည်မျှပင်လှပသည်၊ မည်မျှပင်တန်ဖိုးရှိပါစေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအားလုံးသည်အတိုင်းအဆမဲ့သာလွန်ကောင်းမွန်သောကောင်းကင်ဆုကျေးဇူးများ၏အားနည်းချက်များဖြစ်သည်။
အချို့သောခရစ်ယာန်ဘာသာကိုဝေဖန်သူများကကောင်းကင်၏အယူအဆကိုလက်တွေ့မကျသည့်မျှော်လင့်ချက်အဖြစ်ကဲ့ရဲ့ပြောင်လှောင်ကြသော်လည်း၊ ဒါပေမယ့်တကယ့်မေးခွန်းကတော့ဆုလား၊ မရှိလား။ ကောင်းကင်ဘုံ၌အမှန်တကယ်ဆုတစ်ခုရှိပါက၎င်းကိုခံစားရန်မျှော်လင့်ချက်ရှိလျှင်ရယ်စရာမဟုတ်ပါ။ ငါတို့တကယ်ဆုချခံရတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုတာရယ်စရာပါပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်စစ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်လှူဒါန်းသင့်ပြီး၊ လုပ်ခအတွက်သာအလုပ်လုပ်သောငှားရမ်းသူများအနေဖြင့်မဟုတ်ပါ။ သို့သျောလညျးကမျြးစာကဆုလာဘ်များနှင့်ပတ်သက်။ ပြောနှင့်ငါတို့ဆုလာဘ်လိမ့်မည်ဟုအာမခံပါသည်။ ဘုရားသခင့်ကတိတော်များကိုယုံကြည်ပြီးသူတို့ကိုအားပေးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်သည်။ ဆုလာဘ်များသည်ဘုရားသခင့်ရွေးနှုတ်သောသားသမီးများအတွက်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်ပေးထားသောအစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
Wenn das Leben schwierig wird, ist es für uns hilfreich uns daran zu erinnern, dass es ein anderes Leben gibt, in dem wir belohnt werden. «Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen» (1. ကောရိန္သု ၁5,19). Paulus wusste, dass das zukünftige Leben seine Opfer lohnenswert machen würde. Er gab vorübergehende Genüsse auf, um bessere, langfristige Freuden zu suchen (Philipper 3,8).
Paulus hatte keine Angst, die Sprache von «Gewinn» (Philipper 1,21; 1. တိမောသေ 3,13; 6,6; ဟီး 11,35) zu verwenden. Er wusste, dass sein zukünftiges Leben viel besser sein würde als die Verfolgungen dieses Lebens. Jesus dachte auch an die Segnungen seines eigenen Opfers, und er war bereit, das Kreuz zu erdulden, weil er im Jenseits grosse Freude sah (Hebräer 12,2).
ဘုရားသခင်သည်ငါတို့အတွက်အံ့ good ဖွယ်ကောင်းသည့်အရာတစ်ခုခုကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းလိမ့်မည်။ ဤကောင်းချီးများကိုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်သင့်သည်။ ယေရှုနောက်သို့လိုက်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်သောအခါကတိထားရာကောင်းချီးများနှင့်ကတိတော်များကိုရေတွက်ခြင်းသည်မှန်ကန်သည်။
«Was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen» (Epheser 6,8). «Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus!» (Kolosser 3,23-24). «Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt» (2. ယော ၇)။
Was Gott für uns bereithält geht wahrhaftig über unsere Vorstellungskraft hinaus. Sogar in diesem Leben geht die Liebe Gottes über unsere Fähigkeit sie zu verstehen hinaus (Epheser 3,19). Der Friede Gottes ist höher als unsere Vernunft (Philipper 4,7), und seine Freude geht über unsere Fähigkeit, sie in Worte zu fassen, hinaus (1. ဓာတ်ဆီ 1,8). Wie viel mehr ist es dann unmöglich zu beschreiben, wie gut es sein wird, auf ewig mit Gott zu leben?
ခရစ်ဝင်ကျမ်းရေးသားသူများကကျွန်ုပ်တို့ကိုအသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သေချာစွာသိထားသည့်အရာတစ်ခုမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရရှိမည့်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလှဆုံးပန်းချီကားများထက် ပို၍ ကောင်းသည်၊ အရသာအရှိဆုံးအစားအစာထက် ပို၍ ကောင်းသည်၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးအားကစားများထက်သာလွန်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ခံစားဖူးသမျှအကောင်းဆုံးခံစားမှုများနှင့်အတွေ့အကြုံများထက်သာလွန်သည်။ မြေကြီးပေါ်ရှိအရာအားလုံးထက်ပိုကောင်းတယ်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့ဆုလာဘ်ဖြစ်လိမ့်မည်! ဘုရားသခင်သည်အမှန်တကယ်ရက်ရောသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကြီးမားသောနှင့်တန်ဖိုးရှိသောကတိတော်များကိုရရှိခဲ့ကြပြီးဤအံ့ဖွယ်သတင်းကိုအခြားသူများအားဝေမျှခွင့်ရခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုရွှင်လန်းစွာခံစားသင့်သည်။
Um es mit den Worten von 1. ဓာတ်ဆီ 1,3-9 auszudrücken: «Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner grossen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht; ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit.»